Global Voices teny Malagasy » Serbia: Fisamborana an’i Ratko Mladic · Global Voices teny Malagasy » Print
Serbia: Fisamborana an'i Ratko Mladic
Voadika ny 06 Jona 2011 4:00 GMT 1	 · Mpanoratra Vilhelm Konnander Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bosnia Herzegovina, Serbia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Politika, Vaovao Mafana, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Sady misento no tsy mino ihany koa ireo Serba marobe sy Bosniaka androany raha nandre ny fisamborana ny jeneraly Serba Bosniaka teo aloha Ratko Mladic, izay voampanga noho ny famonoana olona faobe sy ny heloka amin'ny ady nandritra ny ady an-trano tamin'ny taona 1992 hatramin'ny 1995 tao Bosnia-Herzegovina. Talanjona avokoa ny maro tamin'ny fisamborana an'i Ratko Mladic, efa nisy ny faneren'ny iraisam-pirenena tamin'ny taona lasa, mba hitondran'ny manam-pahefana Serba ny jeneraly eo anatrehan'ny fitsarana.
Miteraka ratram-panahy fanampiny ho an'ireo fianakavian'ny roa tonta (Serbia sy Bosnia) izay tao anatin'ny ady sady miaina ao anatin'ny fahatsiarovana ireo namana tsy foy naripaka sy kilemaina ny mahafantatra fa mbola miezivezy any ny tompon'andraikitra tamin'izany heloka izany. Mbola manaporofo ny fahatairana anaty hirifiry ho an'ny maro ny fidarabohan'i Yogoslavia tanatina adim-poko sy fivavahana raha mahita maso mijoro tsy mahavonjy kosa ny mponin'i Eoropa tsy manavaka ny herisetra sy ny heloka bevava amina ambaratonga tsy hitany intsony hatramin'ny nifaranan'i ady lehibe faharoa.
Mbola velona ao Bosnia ny fahatsiarovana sy ny ratram-panahy raha toa ka mbola tsy atolotra ny fitsarana ireo mpamono olona, dia tsy mety misy famahàna avy amin'ny hetraketraka miala aina.
Sarah Correia ao amin'ny Café Turco namariparitra  ny toe-draharaha toy izao:
Aty Kozarac aho amin'izao fotoana izao, toerana izay rava tanteraka hatramin'ny fotony tamin'ny mai 1992. Nankaty Trnopolje aho androany hanatrika fotoam-pahatsiarovana iray ary nahita ny endrik'ireo olona feno hirifiry. Avy eo niverina taty Kozarac aho ary nahare ny vaovao. Ranomasom-pifaliana no hita eny amin'ny mason'ny tsirairay sy ny tsy-finoana ihany koa, fa tonga ny fotoana izay tsy inoan'ny olona ho tonga.
Mbola eo ny ahiahy amin'ireo manam-pahefana Serba ho niray teti-dratsy tamin'ny fanafenana an'i Mladic ary koa mody tsy mahita ny toerana misy azy. Vokatr'izany, iray tamin'ireo fanontaniana napetraka tamin'ny filoha Serba Boris Tadic dia hoe nahoana ny lalàna no tsy nampisambotra an'i Mladic taloha kokoa , araka ny nolazain'i  Sladjana Lazic ao amin'ny A Slice Of Serbian Politics hoe:
Raha nanontaniana izy hoe nahoana i Mladic no tsy nosamborina, dimy taona lasa izay, dia namaly i Tadic fa mbola hisy ny fanadihadina mikasika izany, ary raha voaporofo fa misy tompon'andraikitra tamin'izany raharaha izany tokoa avy amin'ny Governemanta na ny rafi-panjakana hafa niditra an-tsehatra tamin'izany fombafomba izany, dia hohelohina. Nilaza ihany koa i Tadic fa atolotra eo amin'ny Fitsarana Ady heloka bevava ao amin'ny Firenena Mikambana i Mladic saingy tsy nolazainy hoe rahoviana, nolazainy fotsiny fa “efa an-dalana ny fombafombam-pamindran-toerana”.
Ao anatin'ity toe-draharaha ity, dia vato misakana hatry ny ela tsy nahatafiditra ny Serba ho ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny raharaha momba ny mpamono olona an'ady mbola miriaria, ary toa hita fa nanjary “cause celebre” na antony malaza fa ny fepetra tokana ilaina dia ny fisamboran'ny fitondrana Serba an'i Mladić.
Naneho hevitra momba izany, Sleeping With Pengovsky nanoratra hoe :
Tonga tamin'ny fotoana lehibe indrindra ho an'i Serbia ny fisamborana an'ilay mpamono olana tany am-pitsoahana Ratko Mladić. Eo amin'ny fotoana izay heverina fa antomotry ny hahazo daty hidirana ao amin'ny Vondrona Eoropeana i Kroasia, sy fotoana izay hanambaran'ny lehiben'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny Fitsarana ao La Haye, Atoa Serge Brammertz fa tsy mbola ampy ny ezaka ataon'i Serbia tamin'ny fisamborana ireo mpamono olona roa sisa tavela, dia i Mladić sy i Goran Hadžić (izay efa voasambotra vao androany) ; eo amin'ny fotoana hiheveran'ny Vondrona Eoropeana hamerenana indray ny fampiasana Visa amin'ny firenena Balkans sasantsasany, izay mety hahatafiditra an'i Serbia, dia hita taratra fa tsy manan-tsafidy intsony afa-tsy ny mamaha ny olana mikasika an'i Mladić hesorina eo an-databatra i Belgrade.
Tsy mampaninona izay mety ho fihetsehampo na fiontanampo androany mitranga ao Serbia sy ao Bosnia, ity fisamborana ity no fanararaotana hirosoana ho amin'ny ho avy mamirapiratra kokoa sy fomba iray ahafantarana bebe ihany koa ny voina niseho tamin'ny tantara vao haingana ity. Afaka mandry am-piadanana kokoa sy fahamendrehena kokoa noho ny omaly ireo maty an'ady sy niaina anaty horohoro tany Yogoslavia taloha. Mampisy fiovana lehibe tokoa ny andro iray!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/06/06/17914/
 araka ny nolazain'i: http://asliceofserbianpolitics.wordpress.com/2011/05/26/ratko-mladic-arrested/
 nanoratra hoe: http://www.pengovsky.com/2011/05/26/ratko-mladic-found-and-captured/